Ɛyɛ Ampa sɛ Yesu Nyanee Awufo? Adɛn Nti na Ɔyɛɛ Saa? | Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Moore Nahuatl (Central) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zande Zulu
Yesu nyanee n’adamfo Lasaro a na wawu nnanan
Bible si no pi sɛ Yesu nyanee awufo. Saa nsɛm no nyɛ anansesɛm, efisɛ Bible kaa baabi pɔtee a Yesu nyanee awufo no ne bere a ɔnyanee wɔn. Baako ne asɛm a ɛsii afe 31 Y.B. ahohuru bere mu. Yesu ne nnipadɔm bi fii Kapernaum kɔɔ Nain. Wɔduu hɔ no, wɔhyiaa nnipa bebree, na Yesu nyanee obi a wawu. Yɛbɛtumi agye saa asɛm no adi efisɛ ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm Bible mu. Afei nso nnipa pii de wɔn ani hui.—Kenkan Luka 7:11-15.
Bere bi nso, Yesu nyanee n’adamfo Lasaro a na wawu nnanan. Yɛbɛtumi agye saa asɛm no adi, efisɛ ɛno nso sii no, na nnipa pii wɔ hɔ.—Kenkan Yohane 11:39-45.
Dɛn nti na Yesu nyanee awufo?
Nea enti a Yesu nyanee awufo ne sɛ na nnipa asɛm yɛ no mmɔbɔ. Afei nso ɔyɛɛ saa de kyerɛɛ sɛ n’Agya a ɔyɛ Nkwamafo no ama no owu so tumi.—Kenkan Yohane 5:21, 28, 29.
Awufo a Yesu nyanee wɔn no ma yɛn awerɛhyem sɛ nea wahyɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ daakye no nyinaa bɛba mu. Ɔbɛnyane nnipa mpempem pii. Wɔn a ɔbɛnyane wɔn no bi yɛ wɔn a wɔnteɛ. Saafo no yɛ nnipa a na wɔnnim nokware Nyankopɔn no ansa na wɔrewu. Enti sɛ wɔnyane a, wɔbɛnya kwan asua Onyankopɔn ho ade na wɔadɔ no.—Kenkan Asomafo Nnwuma 24:15.